Mourinho oo qirey in uu ka tagayo Real Madrid, kana cawday garsooraha (Daawo video) - iftineducation.com
aadan21 / May 1, 2013
iftineducation.com – Tababarha Real Madrid Jose Mourinho, ayaa sheegay in sanadka soo socde laga yaabo inuusan sii joogin naadiga Real Madrid, oo uu meelo kale ka day dayan doono.
Mourinho, oo naadigiisa Real Madrid 2 iyo eber kaga adkaatay kooxda Borussia Dortmund ee reer Jarmal, ayaan haddana labadaasi gool ku filnaan Real si ay Finalaha ugu gudubto, markii labada lugood ee ay wada cayaareen labadan koox ay noqotey 3 iyo afar oo ay Borussia Dortmund guusha ku raacday.
Isagoo cayaarta ka dib TV-ga ITV la hadlayay, ayuu sheegay Mourinho in uu aad uga niyad jabay mid ka mid ah garsoorayaasha uu aad u jecel yahay ee Webb, kaas oo aanan siin wax calaamad casaan ah daafaca Dortmund ee Matts Hummels, oo uu Mourinho sheegay in xaggiisa uu calaamad casaan ka siiyay kana maqnaanayo kulanka Finalka.
Si kastaba Mourinho, ayaa sheegay in uu aadayo sanadka soo socda meel uu jeclaa in uu qabto. TV-ga ITV ayaa jarey codka Mourinho intuusan dhameyn halka uu aadayo.
Hoose ka daawo Wareysiga Mourinho.